🥇 ▷ Telegram 5.11 wuxuu kuu oggolaanayaa inaad jadwal u sameysato farriimaha, wuxuu leeyahay tifaftiraha mawduuca ka fudud iyo warar kale ✅
Telegram 5.11 wuxuu kuu oggolaanayaa inaad jadwal u sameysato farriimaha, wuxuu leeyahay tifaftiraha mawduuca ka fudud iyo warar kale
Markasta oo aan aaminsanahay in wax walba lagu abuuro farriimaha deg-degga ah, waxaa la yimaadaa cusboonaysiinta Telegram-ka kaas oo siinaya qalloocinta qofna uusan ka fikirin. Waxa la mid ah ayaa lagu celceliyaa mar labaad iyadoo la raacayo nooca cusub Telegram 5.11, hadda waa la heli karaa labadaba Android iyo macruufka.
Xiddigaha isbeddelaya markan waa fariimaha jadwalka ku jira, inkasta oo ay la yimaadaan xulashooyin asturnaanta cusub iyo soo-saaraha mowduuca daruuraha: waxaad kaliya u baahan tahay inaad doorato midab weyn.
Farriimaha jadwalka ku jira
Akhbaaraadka ugu muhiimsan ee Telegram 5.11 waa fariimaha barnaamijyada,, sida magaca macnaheedu yahay, aan la dirin xilligan, laakiin halkii Way badbaadi doonaan ilaa saacadda ugu habboon la helo. Si loo diro waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo taabasho dheer batoonka dirista oo dooro Jadwalka Jadwalka.
Kadib jadwalka farriinta, waxaa ku sii jira xusuusinta Wadahadalka laftiisa, ayaa laga heli karaa astaamaha ku xiga batoonka dirista. Haddii aad beddesho maskaxdaada ka hor intaan la dirin, waad tirtiri kartaa. Haddaysan ahayn, waxaa loo soo diri doonaa hal mar maalinta iyo waqtiga aad dejisay inuu yimaado.
Telegram wuxuu leeyahay mid ka mid ah tifaftirayaasha mowduuca ugu adag ee barnaamijyada fariimaha, iyo nooca ugu dambeeyay tifaftiraha ayaa leh hab fudud oo loogu abuuro mawduucyada: mawduuca Mono. Sida magacu u muuqdo, waa mowduuc ku saleysan hal midab, inkasta oo sheekada cusub ay tahay inaad dooran karto midabkaas.
Sidaa darteed, ka dib markii aad dooratay mawduuca Mono ee dejimaha, waxaad ka dooran kartaa midab mid ka mid ah kuwa la soo xulay ama mid kasta oo kale. Mawduuca si otomaatig ah u abuuraa dhammaan midabada loogu talo galay barnaamijka ku saleysan midka aad dooratay. Jid ahaan, mawduucyada hadda si fudud ayaa loo wadaagi karaa oo haddii, haddii aad wax ka beddel ku sameyso, sidoo kale waxay quseeyaan kuwa ku rakibay xiriirintaada.
Sirta dheeraadka ah
Sidoo kale waxaa jira meel loogu talagalay hagaajinta asturnaanta ee Telegram. Isbadal ku yimid mudaaharaadyadii ka dhacay Hong Kong, hadda waa suurtogal ka qari lambarkaaga taleefanka aduunka oo dhan.
Si tan loo sameeyo waa inaad doorataa Cidna gudaha Ayaa arki kara lambarkayga?, goobaha gaarka ah. Tani waxay awood u siineysaa qaybta dejinta cusub halkaas oo sidoo kale lagu xakameyn karo yaa kaa heli kara lambarkaaga taleefanka, kala doorashada Qof walba ama Xiriirkeyga.
Isbeddellada kuma dhammaadaan halkaas. On macruufka, Liiska macnaha guud ee farriinta ayaa dib loo saxay si loo gudbiyo, loo nuqulo ama looga jawaabo, hadda waxaa lagu muujiyey menu keliya. Intaa waxaa u dheer, waa lagu daray animated cusub animada, gaar ahaan e ????, ????, ????, ????, ???? iyo ????.
Macluumaad dheeri ah | Telegram
Wadaag Telegram 5.11 waxay kuu oggolaaneysaa inaad jadwal u sameysato farriimaha, waxay leedahay tifatire ka sii fudud mawduucyada iyo warar kale